Kutheni besithi uYesu ngunyana kaDavide? Fumanisa i-Intanethi ▷ ➡️ kwi-Intanethi
Kutheni besithi uYesu ngunyana kaDavide? Umbuzo obuzwa ngamaKrestu amaninzi kukuba kutheni uYesu, ezelwe phantse iminyaka eli-1000 emva kukaDavide, ebhengezwa njengonyana wakhe. Kubantu abaninzi kuyinto enzima ukuyiqonda, nangona kunjalo, esona sizathu sinokufumaneka eBhayibhileni. Qhubeka ufunda apha ngezantsi ukuze ufumane impendulo oyifunayo.
1 Kutheni besithi uYesu ngunyana kaDavide?
2 Sibaluleke kangakanani isihloko "Nyana kaDavide"?
3 Unyana okanye inkosi kaDavide?
Kutheni besithi uYesu ngunyana kaDavide
UYesu wayebizwa ngokuba ngunyana kaDavide kuba wayenguye Inzala kaDavide yindlalifa yedinga likaDavide. UYesu wayengunyana kaThixo, kodwa waba ngumntu. Njengomntu, wayeyinzala kaKumkani uDavide.
"Malunga noNyana wakhe, iNkosi yethu uYesu Krestu, owayengowomnombo kaDavide ngokwasenyameni, owamiswayo ukuba unguNyana kaThixo enamandla, ngaye uMoya wobungcwele, ngokuvuka kwabafileyo."
KwabaseRoma 1: 3-4
UDavide wayephila malunga newaka leminyaka ngaphambi koYesu. Xa abantu babiza uYesu "ngunyana kaDavide," ngengqiqo ka "inzala«. UYosefu, utata kaYesu, wayekwabizwa ngokuba ngunyana kaDavide, ngentsingiselo efanayo.
Uthe ke akukhumbula oku, naso isithunywa seNkosi sibonakala kuye ephupheni, sathi kuye, Yosefu, nyana kaDavide, musa ukoyika ukumamkela uMariya, umfazi wakho; ngokuba oko kuzelweyo kungoMoya oyiNgcwele. "
Ke ngoko, ukuze siyiqonde le nto kufuneka siyiqonde igama "unyana ka", Iineentsingiselo ezingaphezulu kunezangoku. Ndiya kuthetha, kananjalo ingaqondwa njenge "nzala ka."
Ngoxa wayesemhlabeni, uYesu wayegqalwa njengonyana kaYosefu. Kuba uYosefu wayeyinzala kaKumkani uDavide, noYesu wayenelungelo lokwaziwa njengenzala kaDavide.
Sibaluleke kangakanani isihloko "Nyana kaDavide"?
Ibaluleke kangakanani isihloko esithi Nyana kaDavide
UNyana kaDavide wayenguMesiya, uMsindisi owayelindelwe ngamaJuda. Ngokwamadinga kaThixo awawenza kwiTestamente eNdala, amaJuda ayesazi ukuba uMsindisi wehlabathi uzakuba:
UmYuda: Thixo wena wathembisa uAbraham, ngukhokho wawo onke amaYuda, athi ngokuzalwa kwawo Zonke izizwe zomhlaba ziya kusikelelwa; Esi sithembiso sadluliselwa kunyana wakhe uIsake nakumzukulwana wakhe uJacob:
«Ndikwenze uhlanga olukhulu, ndikusikelele, ndilikhulise igama lakho, ube yintsikelelo; Ndibasikelele abakusikelelayo, ndibaqalekise abo bakuqalekisayo; Kwaye zonke iintsapho zomhlaba ziya kusikelelwa ngawe » (IGenesis 12: 2-3).
Kwisizwe sakwaYuda: UYakobi waprofeta ukuba Uhlanga lukaYuda lwaluza kulawula phezu kwezizwe zonke zakwaSirayeli:
«Intonga yobukhosi yakwaYuda ayiyi kuthatyathwa, Nommisi-mthetho phakathi kweenyawo zakhe, Ade afike uShilo; Ziya kubuthelana kuye izizwe,IGenesis 49:10).
Kusapho lukaDavid: UThixo wathembisa uDavide ukuba inzala yakhe iya kulawula ngonaphakade.
«Ndenza umnqophiso nomnyulwa wam, Ndifungile kuDavide umkhonzi wam, Ndathi, Ndiya kuyizimasa ngonaphakade imbewu yakho, Ndiyakhe itrone yakho kwisizukulwana ngesizukulwana. (Phakamisani.)»(Iindumiso 89: 3-4).
Njengenzala ethe ngqo, ngokwabantu, kaDavide, UYesu wahlangabezana nazo zonke iimfuno zokuba nguMesiya. Ukuchongwa kwakhe njengonyana kaDavide kwakubalulekile ekuqinisekiseni ukuba uYesu uyindlalifa yezithembiso, uMsindisi wonke umntu wayemlindile.
Xa abantu babiza uYesu ngunyana kaDavide, babevuma ukuba unguMsindisi. Babevuma ukholo lwabo kuYesu.
Bakhwankqiswa bonke abantu, bathi, Lo nguNyana kaDavide na?
Unyana okanye inkosi kaDavide?
Wayengubani uYesu: unyana okanye inkosi kaDavide
UYesu wavavanya abaFarisi, ebuza ukuba uMsindisi angangunyana kaDavide njani kunye neNkosi yakhe kwangaxeshanye. Iziprofeto zazisithi uyakuba ngumnombo kaDavide, kodwa noDavid waprofetha ukuba uMesiya uya kuba yinkosi yakhe. Unyana wayengenagunya kuyise, ngoku ke uDavide wayenokuba sisicaka sonyana wakhe njani?
Bakubon 'ukuba bahlanganisene ke abaFarisi, uYesu wabuza, esithi, Nicinga ntoni ngoKristu? Ngubani utata wakhe?
Bathi kuye, EkaDavide.
Wathi kubo, Yini na phofu ukuba uDavide ngoMoya ambize ngokuthi, Nkosi, esithi,
INkosi yathi eNkosini yam:
Hlala ngasekunene kwam
Ndide iintshaba zakho ndizenze isihlalo seenyawo zakho?
Ewe, ukuba uDavide umbiza ngokuba yiNkosi, unjani unyana wakhe?
UMateyu 22: 41-45
UYesu wabuza lo mbuzo kuba abaFarisi babecinga ukuba banayo inyaniso, kodwa babengafuni ukwamkela ukuba unguMsindisi. UYesu wabonisa ukuba babengazi yonke into. Impendulo kwiliqhina kukuba UYesu wayevela kuDavide kuphela ngokwabantu. UYesu naye wayenguThixo, ngoko ke wayephila kudala phambi kokuba kuzalwe uDavide kwaye wayemkhulu kunaye.
Kube njalo! Siyathemba ukuba eli nqaku likuncedile ukuba uqonde isizathu kutheni besithi uYesu ngunyana kaDavide. Ukuba ngoku ufuna ukufunda indlela yokwandisa ubuhlobo bakho noThixo, sikubonisa ngokwamanqanaba ama-5.